Tetikasa Tana-Masoandro :: Mandroso ny fifampiraharahana amin’ireo tompon-trano sy tany • AoRaha
Tetikasa Tana-Masoandro Mandroso ny fifampiraharahana amin’ireo tompon-trano sy tany
Fantatra fa vaomiera manokana no hanombana ny teti­bidin’ny tany sy trano ary ny fananan’ny mponina, izay voakasiky ny tetikasa “ Tanà- Masoandro “ eny amin’ny faritra Ambohitrimanjaka. Mitohy ny fandraisana sy fifampiraharahana amin’ireo tompon-trano sy tany etsy amin’ilay birao etsy Andoha­tapenaka.
“Efa nisy fotoana nanaovan’ireo mpikambana ao amin’io vaomiera io fidinana ifotony teny Ambohitrimanjaka. Hoezahinay kosa ny hamoaka ny vidin’ny tanin’ ireo mponina amin’ny herinandro”, hoy Rateloson Philippe, tale jeneralin’ny Apipa, nandritra ny fan­drai­sana an’ireo mponina eny Ambohitrimanjaka tao amin’ny birao manokana eny Andohatapenaka, omaly.
Miisa valopolo ireo olona, tompon-tany, efa tafiditra ao anatin’ny lisitr’ireo hahazo fanonerana hatramin’ny omaly antoandro. Milamina avokoa ny taratasin-tanin’izy ireo, araka ny fanamarinana nataon’ny Apipa. Olona fitonjato mahery kosa no mivezivezy eny an-toerana maka fanampim-panazavana rehetra ilaina sy mampiseho ny taratasy maha tompon’ny tany azy ireo ao anatin’ny dingana voalohany amin’ny tetikasa izay mivelatra amin’ ny tany 100Ha.
“ Takinay ny tokony hanaovana mangarahara ny fanomezana ny vola vidin’ny tany”, hoy kosa ny raim-pianakaviana iray avy eny Ankadimanga Ambohi­drapeto.